Zopo Color S5.5 izahay dia mamakafaka azy ho anao | Androidsis
Zopo Iray amin'ireo zavatra tsy nampoizina nandritra ny andiany farany tamin'ny Mobile World Congress. Ilay mpanamboatra aziatika, miaraka amin'ireo birao any Espana, dia nahagaga anay tamin'ny fanolorana ireo telefaona findainy vaovao, miaraka amin'ny Zopo Speed ​​8 mahery amin'ny maha-flagship an'ny mpanamboatra izay hanome be horesahina.
Ankehitriny, aorian'ny fampiasana iray volana dia mitondra anao a famerenana feno ny Zopo Color S5.5, phablet misy efijery 5.5-inch izay niavaka tamin'ny vidiny namboarina: 159.99 euro. Ary mijery ny zava-bitany, raha mitady phablet mora vidy ianao, ny smartphone Zopo dia iray amin'ireo mpirotsaka hofidina tsara indrindra.
1 Zopo Color S5.5, endrika tsotra sy azo ampiharina
2 Ny toetra ara-teknika amin'ny haavon'ny fidirana - eo ho eo antonony
3 Sarimihetsika mety tsara hankafizanao atiny multimedia
4 Fakan-tsary somary voafetra
4.1 Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Zopo Color S5.5
5 Batterie manana fahaleovan-tena tsara
Zopo Color S5.5, endrika tsotra sy azo ampiharina
El Zopo Color S5.5 famolavolana Tsotra be izy io, telefaona iray izay tsy miavaka amin'ireo mpifaninana aminy. Ny vatany vita amin'ny polycarbonate malama dia manome sentra mahafinaritra sy fahatsapana tsara eo an-tanana. Ho fanampin'izany, io faritra malama io dia manakana ny vatan'ny telefaona tsy handoto. Andininy tokony hotadidina.
Na eo aza ny haben'ny efijery dia tadidio fa telefaona misy takelaka IPS 5.5 santimetatra ity, ny Zopo Color S5.5 dia mahazo aina tokoa noho ny fandrefesana azy henjana: 153.9x77.1x9 mm. Ny antsipiriany iray tena tiako dia ny Zopo Color S5.5 maivana ihany, milanja 167 grama fotsiny.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny telefaona no ahitantsika ny fanalahidy fanaraha-maso ny volume, ankoatry ny bokotra on / off terminal. ny mafy ny fanamboarana ary manolotra fikitika marina rehefa tsindriana, toa maharitra ihany izy ireo. Milamina tanteraka ny ilany havia amin'ny fitaovana. Na eo amin'ny lafiny ambony aza ny ekipa mpamorona Zopo dia nampiditra ny vokatra jack 3.5, eo amin'ny lafiny ambony kosa dia misy ny mikrophone terminal sy ny seranan-tsambo famahanana micro USB.
Asongadino ny mpandahateny, miorina eo amin'ny farany ambany amin'ny tontonana aoriana amin'ny Zopo Color S5.5. Izaho manokana dia tiako fa napetrak'i Zopo tao ilay mpandahateny satria io fomba io dia tsy mandrakotra na oviana na oviana rehefa raisinao amin'ny tananao. Andininy iray tena manandanja tokoa raha jerena fa ireo karazana telefaona ireo dia natao hankafizanao ny atiny multimedia noho ny efijery lehibe ananany.
Raha fintinina, telefaona iray izay tsy miavaka amin'ny fisehoany hafa amin'ny hafa fa mihoatra ny fanatanterahana ny asany, tena mahazo aina eo an-tanana manolotra fahatsapana mahafinaritra rehefa mitazona azy. Azoko atao ny mitsikera ireo tabilao be eo aloha, saingy raha jerena ny vidiny dia tsy misy zavatra hitarainako.
Ny toetra ara-teknika amin'ny haavon'ny fidirana - eo ho eo antonony
efijery 5.5-inch IPS misy vahaolana HD (1280 x 720 teboka) ary 267 dpi.
processeur MediaTek MT6735 Quad Core ARM Cortex A53.
Fitahirizana anatiny 8 GB azo esorina amin'ny karatra ivelany hatramin'ny 64GB.
Fakan-tsary Rear 8858 megapixel OV8 miaraka amina f2.8 aperture / 1080p kalitao amin'ny frame 30 / LED Flash.
Fakan-tsary eo aloha Fandraisam-peo kalitao 2680 megapixel OV2 / f2.8 / 720p.
Conectividad 2G GSM Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G WCDMA Bands 1/2/8 (900/1200/2100 MHz) 4G FDD-LTEE Bands 1/3/7/20 (800 / 1800/2100/2600 MHz)
Fomba hafa Fanohanana Bluetooth 4.0 / Dual SIM / GPS + GLONASS / WiFi 802.11 a / b / g / n / Accelerometer / Magnetometer
Rafitra fandidiana Android 5.1 Lollipop.
lafiny 153.9x 77.1 x 9 mm
lanja Gramin'ny 137
vidiny 159.99 euros amin'ny alàlan'ny tranonkala Zopo
Amin'ny lafiny teknika ny Zopo Color S5.5 dia mahavita tsara. Manomboka amin'ny telefaona dia miaraka Android 5.1 madio, zavatra tiako. Rehefa nitafatafa tamin'ny CEO an'ny orinasa izahay dia nanadihady tamin'i Víctor Planas, CEO an'ny Zopo Iberia, nilaza mazava taminay izy ireo fa ny orinasa dia tsy te handanja ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko namboarina ary toa mitazona ny teny
Araka ny efa hitanao tamin'ny famakafakana video, ny Zopo Color S5.5 dia milamina tsara na eo aza ny RAM voafetra, mamela anao hilalao lalao tsy misy olana be loatra. Ok, nisy fotoana aho nahatsikaritra taraiky vitsivitsy, saingy tsy dia nahasosotra loatra ny nilalaovana ilay lalao. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy lazaina fa nanatsara tsara ny findainy i Zopo. Porofon'izany ny teboka efa ho 23.000 no tratra tao AnTuTu, Fahamendrehana mandinika ny haben'ny efijery an'ny Zopo Color S5.5
Alohan'ny handehanako amin'ny fizarana lamba dia tiako ny manasongadina iray hafa amin'ny tanjaky ny Zopo Color S5.5: ny kalitaon'ny feon'ny mpandahateny anao. Ary ny tena izy dia ny mpandahateny aoriana an-telefaona dia manolotra kalitao am-peo amin'ny haavon'ny elanelam-potoana avo lenta, mamela anao hankafy horonan-tsary miaraka amin'ireo namanao bebe kokoa.
Sarimihetsika mety tsara hankafizanao atiny multimedia
Ny mpandahateny mahery vaika dia tsy hampiasaina loatra raha toa ka tsy nifandanjana ny fampisehoana ny Zopo Color S5.5. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Raisina an-tsaina fa ny terminal dia manana tsotra Tontonana IPS 5.5 inch izay mahatratra ny vahaolana 1280 x 720 teboka, mila milaza aho fa ny kalitaon'ny sary, raha tsy mahatratra ny hatsaran-tarehin'ny maodely lafo vidy hafa, dia mihoatra ny mahafeno ny filan'ny mpampiasa rehetra. Ary vao mainka ho an'ireo izay tsy te-handoa mihoatra ny 200 euro ho an'ny phablet.
Ny fampisehoana ny tolotra Zopo Color S5.5 loko mazava sy maranitra, mamela azy io hijerena azy amin'ny tontolo misy anao, na dia somary mazava aza ny andro. Ankoatr'izay, ny zoro fijerena dia feno tanteraka, mba hahafahan'ny olona maromaro mankafy horonan-tsary amin'ny Zopo Color S5.5 tsy misy olana. Asa tsara avy any Zopo amin'ity lafiny ity.
Fakan-tsary somary voafetra
Izay misy ny kitoatoa Zopo Color S5.5 dia ao amin'ny faritra fakantsary. Mitandrema, tsy maintsy tadidintsika fa miatrika telefaona midadasika izahay fa mazava fa amin'ny lafiny sasany dia tsy maintsy notapahin'ilay mpanamboatra Aziatika izany, ary niaraka tamin'ny fakantsary.
Ny Zopo Color S5.5 dia mampiakatra fakantsary roa avy amin'ilay mpanamboatra Omnivisión, mpifaninana mivantana amin'i Sony eo amin'ny tsenan'ny fakan-tsarimihetsika smartphone. Ny efi-tranony lehibe dia misy a 8858 mpijery OV8 XNUMX megapixel miaraka amina lantira f / 2.8 sy 3, raha eo aloha kosa dia ahitantsika sensor 2680 megapixel OV2 miaraka amin'ny lantira f / 2.8 sy 3.
Araka ny hitanao, ny kalitaon'ireo sary dia somary latsaka kely raha oharina amin'ireo telefaona midadasika hafa fidirana, na dia mbola maka sary aza isika amin'ny tontolo iainana tsara, ny fakantsary Zopo Color S5.5 dia mihoatra ny manao ny asany . Mazava ho azy, hadino ny maka sary tsara amin'ny tontolo maizimaizina, toy ny telefaona an-tsena rehetra izay manao ny marina ...
Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Zopo Color S5.5
Batterie manana fahaleovan-tena tsara
Ny batterin'ny Zopo Color S5.5 no nahagaga lehibe an'ity telefaona ity. Araka ny efa nampoizina rehefa mampiasa lalao maromaro dia lany haingana tokoa ny bateria, saingy amin'ny fampiasana an-telefaona mahazatra (mihaino mozika mandritra ny adiny iray, manodidina ny roa na telo ora fitetezana, mamaly ireo mailaka sy hafatra hafa ary zavatra hafa) ny telefaona amiko naharitra teo anelanelan'ny iray andro sy iray andro sy sasany izany. Ka amin'ity lafiny ity dia tsy manan-kianina aho.
Raha be indrindra dia tsy manana rafitra famerana haingana izy io. Saingy manao raharaham-barotra toy ny mahazatra izahay, tsy azonao atao ny mangataka karazana antsipiriany rehetra amin'ny telefaona midadasika.
Phablet mety tsara ho an'izay mitady a telefaona misy efijery lehibe amin'ny vidiny mirary. Mitady phablet izay latsaky ny 160 euro? ny Zopo Color S5.5 no safidy tsara indrindra. Te hanome ny findainao voalohany ny zanak'anabavinao ve ianao? Aza misalasala, ny ankizy dia mila efijery lehibe ary ny Zopo Color S5.5 dia hamela azy hilalao lalao rehetra.
Zopo Color S5.5 efijery manolotra fampisehoana lehibe
Volavola tena tsotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Zopo Color S5.5, phablet tena mahaliana tsy latsaky ny 160 euro
Antony 10 mahery hampiorenany amin'ny findainao